Khabar Kantipur » ५३२ नेपाली युवा बिदेशी जेलमा, कुन देशमा कति ?
५३२ नेपाली युवा बिदेशी जेलमा, कुन देशमा कति ?
बैदेशिक रोजगारीका क्रममा बिदेशमा रहेका ५३२ नेपाली जेल परेका एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
जेलमा रहेका मध्ये २५ जनालाई मृत्युदण्ड सजाय सुनाइएको छ । यो नेपाल सरकारका मात्रै तथ्याङ भएकाले यो भन्दा धेरै नेपाली जेलमा रहेको हुनसक्ने समाचार आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।\_